Apple inotanga kutengesa yakadzorerwa Apple Watch | IPhone nhau
Apple inotanga kutengesa yakagadziridzwa Apple Watch
Kufunga nezvekuwana chigadzirwa chitsva cheApple? Kana zvirizvo, mhanya kuApple Chitoro kungave online kana kwepanyama, isu tiri mu Nguva kana yakanyanya kuoma kuwana chipo chakakwana kubva kuvakomana vanobva kuCupertino. Uye ndezvekuti paKisimusi pane zvakawanda zvigadzirwa zvinoshomeka kudura, tisingatauri izvo zvitsva AirPods, mahedhifoni matsva asina waya ari basa risingabviri paKisimusi iyi zvisingaite kuti uzviwane mune yeApple Chitoro, ndoda kuzviwana muApple Chitoro online kana iwe uri kufunga kuzviwana pamberi peKisimusi.
Uye ndeyekuti Apple inoziva maitiro ekuzviita chaizvo nekugadzira izvo hype zvakadii zvinoita kuti titenge zvigadzirwa zvemhando. Ehe, panogara paine dzimwe nzira ... Unogona kugara uchidzitora mune zvimwe zvigadzirwa zvetekinoroji, kana kuzvitenga kubva kune vamwe vanhu Ive nekuchengetera neyekupedzisira nekuti pakupedzisira zvese irotari ... Zviri nani kupfuura nechikamu chezvinhu zvakadzoreredzwa zvigadzirwa (zvakagadziridzwa) zveApple kwaunogona kuwana kubva kuMac yakadzorerwa kune iyo yakadzoreredzwa iPhone. Ikozvino, Apple Watch. Vamwe Yakagadziridzwa Apple Watch kuti tinogona buy zvakananga mu Apple Chitoro neApple Hunhu Chitupa.
Pari zvino kupihwa kwakagadziriswa Apple Watch (kana kugadziridzwa) inongowanikwa mu American Apple Chitoro, mamwe maApple Watch atinogona kuwana kubva pamazana maviri nemakumi mapfumbamwe emadhora ekuAmerica. Pasina kupokana chipo chikuru sezvo michina iyi iine chitupa cheApple, ndiko kuti, unogona kuva nechokwadi chekuti hauzove nematambudziko neApple Watch. Vose vane kusvika pamadhora zana kubviswa saka unenge uri kuchengetedza chimwe chinhu.
Apple Kuona Series 1 Sport 38mm kubudikidza $229
Apple Kuona Series 1 Sport 42mm kubudikidza $249
Nhepfenyuro dzeApple 2 42mm mune simbi ne $509
Unoziva, kana uchigara muUnited States uye urikufunga nezve kutora Apple Watch usapotsa ichi chikumbiro. Iva 1 year warranty, senge zvese zvigadzirwa zveApple zvaunotenga muUnited States, uye unogara uine mukana we wedzera iyi nguva nekuwana Apple Care. Apple inotonga zvese zvigadzirwa zvakagadziridzwa kuita kuitira kuona izvozvo sangana su mhando dzemhando yepamusoro, saka haufanire kunge uine dambudziko neyakagadziridzwa Apple chigadzirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inotanga kutengesa yakagadziridzwa Apple Watch
Nintendo haina kuronga kuwedzera zvirimo zve Super Mario Run
Viber inozvivandudza pachayo nekuwedzera pakarepo mavhidhiyo mameseji